Indida ngesidumbu esitholwe eDambuza | News24
Indida ngesidumbu esitholwe eDambuza
USASHAQEKILE umphakathi wasendaweni yakwaDambuza ngemuva kokukhothalakala kwesidumbu sowesilisa sidindilizile kule ndawo.
Ngokuthola kwe-Echo isidumbu sowesilisa oneminyaka engama-51 amalunga omphakathi ngoLwesinhlanu olwedlule mhlaka-8 kuLwezi (November) sinenxeba lokugwazwa. Imbangela yokubulawa kwakhe ibingaka caci. Ikhansela lakule ndawo uMnu Mntuza Mkhize uthe sibuhlungu kakhulu lesi sigameko kanti futhi siyinto abangafuni ukuyibona iphinda yenzeka. Uthe ngolwazi alutholile kuthiwa lona wesilisa otholiwe ubephuma endaweni yokuzijabulisa ngesikhathi ebulawa.
“Ubugebengu nje into esingahambisani nayo kanti siyafisa ukuthi sisebenzisane namaphoyisa ukwehlisa izinga lobugebengu kule ndawo.
“Siyafisa ukuthi amaphoyisa abekhona endaweni abonakale ahlole indawo ukuze ezobona izinto ezenzekayo akwazi nokuthi abophe izigilamkhuba. Njengoba namanje kuthiwa lona otholakele ubephuma ezindaweni yokuzijabulisa, ukube ebekhona amaphoyisa ahamba ezulazula hlampe abezobona ukuthi kwenzekeni, ngoba siyakholelwa ekutheni kukhona lapho ingxabano isuke khona ngaphambi kokuba aze abulawe,” kubeke yena.
UMnu Mkhize uthe akusona isigameko sokuqala lesi ukuba senzeke kule ndawo ukuthi kutholakale umuntu ebulewe kade ephuma endaweni yokuzijabulisa.
“Noma zingenzeki ngoku landelana kodwa cishe zinhlanu manje izigameko ezifuze lezi esezike zenzeka kule ndawo. Siyakholelwa ukuthi uma ngabe kungaba khona imithetho eqinile ngalezi zindawo zobumnandi ezivula kuze kuse kungaba khona umehluko.
“Sicela umphakathi usebenzisane nezinhlaka ezifanele ukulwisana nobugebengu kule ndawo ungazithatheli umthetho ngezandla.”
Okhulumela amaphoyisa eMgungundlvou uSergeant Mthokozisi Ngobese uthe amaphoyisa aphenya icala lokubulala, kodwa bekungakaboshwa muntu.